Rant - စကားဝှက်စုစည်းမှုနဲ့သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 9, 2014 အင်္ဂါနေ့, မေလ 2, 2017 Douglas Karr
ဒီနှစ်ကျွန်ုပ်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာစာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည် Dashlane။ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်အားလုံးကိုမိုဘိုင်း၊ ဒက်စ်တော့နှင့်ဝဘ်အတွက်သူတို့၏လုံခြုံပြီးစာဝှက်ထားသောစနစ်တွင်မထားပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါသုံးပြီးကတည်းကငါ့ရဲ့စကားဝှက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတောင်မှမသိဘူး Dashlane Chrome Plugin ကို web မှတစ်ဆင့် login လုပ်ရန်၊ အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် Desktop Version နှင့် Mobile App logins များအတွက်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း။
Dashlane တွင်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောနောက်ထပ်အရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရုံးမန်နေဂျာ၊ စာရင်းကိုင်၊ စီမံကိန်းမန်နေဂျာနှင့်တီထွင်သူများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ ငါသူတို့ကိုစကားဝှက်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအသုံးပြုရန်အတွက်ကန့်သတ်ထားသောအခွင့်အရေးများကိုကြည့်ရှုရန်အပြည့်အဝအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကငါသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အရေးပေါ်ဆက်သွယ်မှုကိုပေးပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အရေးပေါ်စာရင်းမှတစ်စုံတစ် ဦး ကိုခွင့်ပြုချက်မပေးနိုင်ပါက၎င်းတို့သည်ဝင်ရောက်ခွင့်တောင်းခံနိုင်သည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌ကျွန်ုပ်မတုံ့ပြန်ပါကသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်ခွင့်ကိုရရှိသည် Dashlane အကောင့်။
ငါ၎င်းကိုစက်များ၊ ကွန်ယက်များနှင့်ပလက်ဖောင်းများတွင်သုံးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် login တိုင်းအတွက်ဗဟိုသိုလှောင်ခန်းတစ်ခုနှင့်စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်းရှိခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ Dashlane ဘယ်စကားဝှက်တွေမရှုပ်ထွေးတာလဲ၊ ကျွန်တော့်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ် ၀ င်ရောက်သောစနစ်တိုင်းအတွက်ထူးခြား။ ခိုင်မာသောစကားဝှက်များရှိသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ရဲ့စကားဝှက်တစ်ခုရလိုက်ရင်သူတို့က ၀ န်ဆောင်မှုတိုင်းကိုမရတော့ဘူး။ ပြီးတော့သူတို့ Dashlane ကို login လုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် login လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ device အသစ်တိုင်းကိုငါခွင့်ပြုရမယ်။
အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုစကားဝှက်တွေနဲ့ပြproblemနာဖြစ်စေတယ်။ Dashlane ကျွန်တော့်ဘဝကို ၁၀ ဆပိုမိုလွယ်ကူစေခဲ့ပေမယ့်တချို့ application တွေကကျွန်တော့်ဘဝကိုဆယ်ဆပိုခက်ခဲစေခဲ့တယ်။ တူညီတဲ့ပလက်ဖောင်းအတွက် ၂ စက္ကန့်တိုင်းမှာစကားဝှက်တစ်ခုရေးထည့်ရန်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ သင်ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို download လုပ်ပါ။ သင်၏စကားဝှက်ကိုရေးထည့်ရမည်။ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းပါ။ သင်၏စကားဝှက်ကိုရေးထည့်ရမည်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းဤ ငါတူညီသော session တစ်ခုအတွင်းမှာ logged ပြီးပါပြီ!
ရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲသောစကားဝှက်တစ်ခုကိုဖန်သားပြင်တစ်ခုပေါ်တွင်ပြုလုပ်ရန်လူများကိုမတောင်းဆိုပါနှင့်။ ထို့နောက်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးတွင်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုတိုင်းတွင်စကားဝှက်ကိုတောင်းခံပါ။ Dashlane ကဲ့သို့စနစ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်များကိုအလွတ်ကျက်တော့သည်မဟုတ်ပါ၊ ကူးယူပြီးကူးယူလိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် Dashlane သို့ ၀ င်ရန်၊ စကားဝှက်ကိုကူးယူရန်၊ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ရန်၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုတင်သွင်းရန်၊ ပြီးနောက်၎င်းနောက်တောင်းဆိုမှုတိုင်းတွင်ကူးယူထားရန်လိုအပ်သည်။
လက်ကိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းအချို့သည်စာလုံး ၁၄ လုံးလုံးကိုစာလုံးအကြီးများ၊ နံပါတ်များ၊ သင်္ကေတများဖြင့်တင်သွင်းခြင်းထက်ဂဏန်း ၄ လုံးကုဒ်များသို့မဟုတ်ပွတ်ဆွဲခြင်းအစီအစဉ်များသို့ရွေ့လျားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် iOS စက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏လက်ဗွေကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုနှစ်သက်သည်။ အချို့သောအက်ပ်များနှင့်အတူစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသရန် (လူတိုင်းတွင်ရှိသင့်သည်!) ။
လုံခြုံစိတ်ချရသောစကားဝှက်ရှိသူများကိုစင်မြင့်မှတစ်ဆင့်တိုးတက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောရွေးချယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ငါအချိန်ကိုက်အချိန်နှင့်စကားဝှက်ကိုလိုအပ်စိတ်ထဲမထားဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလျှောက်လွှာ၌ရှိကြ၏သောအခါ, ဒါဟာလုံးဝရယ်စရာပါပဲ။
ထုတ်ဖော်။ သင်ကစာရင်းသွင်းလျှင် Dashlane ငါ့အကောင့်နဲ့ Dashlane အပေါ်က link ကိုငါ6လရ Dashlane ပရီမီယံ!